1954-1964 Evinrude sy Johnson 5.5 HP outboard sambo maotera Model Number Reference. Ny modely dia matetika isa nitaingina eo amin'ny seranan-tsambo ny maotera lafiny bracket. Raha vao manana ny modely isa, izahao ny taona noho ny maotera ao amin'ny Model Number Reference.
eto dia ny lisitry ny faritra dia mila ny miray feo ambony ny 1954-1964 Evinrude sy Johnson 5.5 HP outboard sambo maotera.
Jereo koa 5.5 HP Johnson 1960 Modèle CD-17 Tetikasa nataon'i Bosse "Bo" Petersson - Stockholm, Soeda
Fampitandremana About Pressurized Fuel fiara mifono vy - Mampiasa fiara mifono vy misy pressurized ireto motera ireto. Raha tokony hitsentsitra solika avy ao anaty tanky, ny fantsom-pifandraisana roa dia manapoka ny rivotra ao anaty tanky, manery azy io ho 4-7 PSI izay manery ny solika hiverina amin'ny motera. Amin'ny ankapobeny, ireo fiara mifono vy voahitsakitsaka ireo dia loza mitatao amin'ny afo na loza mitatao. KITIHO ETO mba hianatra bebe kokoa momba ireo fiara mifono vy sy ny fomba niova ho azo antoka kokoa ny vaovao sy solika fiara mifono vy.